ဧဝံဂေလိဆရာ၏တာဝန် | The Work of an Evangelist | Real Conversion
၂၀၁၂၊ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ရက်၊
“သာသနာပြုဆရာ ဆောင်ရွက်ရသောအမှုကို ဆောင်ရွက်လော့” (၂တိ ၄း၅)
သာသနာပြုဆရာ ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာ၌ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ၎င်းတို့ကို တမန်တော် ၂၁း၈၊ ဧဖက်ဩဝါဒစာ ၄း၁၁နှင့် ဂရိဘာသာစကားဖြင့် “ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုဟောပြောသူ” (ဠငညန) ဟူ၍ ဧဖက်ဩဝါဒစာ ၄း၁၁၌ “သာသနာပြုဆရာ”တို့သည် ဆုကျေးဇူးအစွမ်းသတ္တိနှင့် ပြည့်စုံသောသူကဲ့သို့၎င်း တမန်တော်အရာ၌၎င်း၊ ပရောဖက်ပြုသောသူအရာ၌၎င်း ထိုသို့ဖြစ်ကြသည်။ သာသနာပြုဆရာမည်သည်ကား မယုံကြည်သေးသောသူတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းဝေငှဖို့ရန် ဘုရားသခင်က အသင်းတော်ထဲသို့ ခွဲခန့်ထားသောသူတို့ ဖြစ်ကြသည်။ တိမောသေသည် သင်းအုပ်ဆရာတစ်ပါးဖြစ်သည်။ သူ့အား ရှင်ပေါလုက “သာသနာပြုဆရာ ဆောင်ရွက်ရသောအမှုကို ဆောင်ရွက် လော့”ဟူ၍ မိန့်ကြားထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်းအုပ်ဆရာသည် အသင်းတော်သို့ ရောက်ရှိလာသော မယုံကြည်သူတို့အား ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဝေငှရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ တမန်တော်ကြီးက တိမောသေအား မိန့်တော်မူသမျှတို့ကို အမှုတော်ဆောင်တို့အားလုံးအား “သာသနာပြုဆရာဆောင်ရွက်ရသောအမှုကို ဆောင်ရွက် လော့”ဟူ၍ ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (၁၆၉၇-၁၇၇၁ခုနှစ်) ဒေါက်တာဂျွန်ဂီးလ် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ထိုသို့သော အမှုဆောင်တို့သည် အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာ စာပေတို့ကိုသာ ဖတ်ကြားဆုံးမနေဖို့သာ မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ သနားခြင်းဂရုဏာ ကြောင့် ခံစားရသော ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း ဖြောင့်မတ်ခြင်း ထာ၀ရအသက်နှင့်ဆိုင်သော ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုသာ ဟောကြားရမည်ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ (John Gill .D.D., An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume III, p.34 note on II Timothy 4:5).
ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းပြီး ပြည့်စုံနေပြီဖြစ်သည်။ သင်းအုပ်ဆရာတို့ သည် ခရစ်တော်ဘုရား၏ ဧဝံဂေလိသတင်းကိုသာ ဝေငှရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ရှေ့ယခင်သင်းအုပ်ဆရာတို့ ရာစုနှစ်အဆက်ဆက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ သို့တိုင်အောင် နောက်ဆုံးသောယနေ့ခေတ်တွင် သင်းအုပ်ဆရာတို့သည် ထိုသို့ကြိုးစားအမှုဆောင်မည့် အစား ရောသမမွှေနေကြပြီဖြစ်သည်။ ရှောလမုန်မင်းကြီး မိန့်ကြားထားသည့်အတိုင်း “ငါတွေ့သောအရာ တစ်ခုတည်းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် လူတို့ကို ဖြောင့်မတ်အောင် ဖန်ဆင်းထားတော်မူသော်လည်း လူတို့သည် များပြားသောအကြံအစည်တို့ကို ရှာဖွေကြံ စည်ကြပြီ” (ဒေသနာ ၇း၂၉)ဟူ၍ မိန့်ကြားထားပါသည်။
အများအားဖြင့် သင်းအုပ်ဆရာတို့သည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ဟောကြား ကြမည့်အစား “ကျမ်းပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ချင်းကို လေ့လာသည့်ပညာ” အားဖြင့် ဝေငှဟောပြော ကြပြီ။ အဆုံး၌ လူထုပရိသတ်တို့ကို “ဖိတ်ခေါ်ဆွဲဆောင်” ကြသည်။ ၎င်းသင်းအုပ် ဆရာတို့အနက် အချို့သည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဝေငှဖို့ မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ပင် မသိကြပေ။ဍ မကြာခဏထိုသူတို့သည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဖြစ်သော ခရစ်တော် ဘုရားအသေခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကို မဟောကြားကြပဲ “ကျမ်းပိုဒ် တစ်ပိုဒ်ခြင်းလေ့လာခြင်းပညာရပ်” ဖြင့်ဟောကြားကြပြီ။ အဆုံး၌ လူထုပရိသတ်တို့အား “ဖိတ်ကြား” ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသူ ဟောကြားခြင်းကို ကျွန်ုပ်အဖို့တော့ ကန့်ကွက်သင့် သည်ဟု ထင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တမန်တော်ရှင်ပေါလု ရိုးရှင်းစွာမိန့်ကြားခဲ့ သည်မှာ “သာသနာပြုဆရာ ဆောင်ရွက်ရသောအမှုကို ဆောင်ရွက်လော့”ဍ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်သည် ထိုသူတို့အပြစ်အတွက် အသေခံတော်မူသည်ကို ဘုရား ကျောင်းသို့ တက်ရောက်လာကြသောသူတို့သည် သိကြသည်ဟူ၍ ဘယ်တော့မှ မယူဆပါနှင့်ဍ ခရစ်တော်သည် ထိုသူတို့အဖို့ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကို ပြုပေးခဲ့သည်ကို ဘုရားကျောင်းတက်ရောက်လာသောသူတို့သည် သိကြ၏ဟူ၍ ဘယ်တော့မှ မယူ ဆပါနှင့်။ “သမ္မာကျမ်းစာ တစ်ပိုဒ်ချင်းကို လေ့လာသောပညာရပ်ဖြင့် ဟောကြားသော ဒေသနာကို ဘုရားကျောင်းသို့ ပုံမှန်တက်ရောက်သော တရုတ်အမျိုးသမီး နှင့်စကားပြောခဲ့သည်ကို သတိရမိပါသည်။ လူတစ်ဦး ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်ကို မေးကြည့်ရာ သူသည် ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးနေသော ရောမန်ကာ သိုလစ်ထက်ပင် မသိဘဲဖြစ်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဒေသနာတော်ကို နားထောင်နေသောသူတို့အား ကယ်တင်ခြင်းခံပြီးသောသူ သို့မဟုတ် ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်း အခြေခံကြားဖူးပြီးသူဟူ၍ မထင်မှတ်သင့်ပေဍ။
ဓမ္မသစ်ကာလ၌ “ဧဝံဂေလိဆရာ”ဟု ခေါ်သောသူတပါး ရှိခဲ့ပါသည်။ သူသည် တမန်တော် ၂၁း၈၌ ဖေါ်ပြသော “ဧဝံဂေလိဆရာ ဖိလိပ္ပု” ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤတရား ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာချန်မှ ဖတ်ကြားပေးခဲ့သည်။ ဧဝံဂေလိဆရာဖိလိပ္ပု၏ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းအား ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်း ဟောကြားခြင်းအသွင်သဏ္ဍာန်ကို သမ္မာကျမ်းစာ၌အများအပြား ဖေါ်ပြ ထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ဖေါ်ပြထားသည်ကို အသေးစိတ်မကြည့်ပါက တစ်သီး ပုဂ္ဂိုလ ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကို ကောက်နုတ်တင်ပြပေးပါမည်။
၁။	ပထမ၊ ဖိလိပ္ပုက ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ဟောကြားသောအခါ လူအများတို့သည် အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြသည်။
“ဖိလိပ္ပုသည်လည်း၊ ရှာမရိမြို့သို့သွား၍ ခရစ်တော်၏အကြောင်းကို ဟောလေ၏။ လူအစုအဝေးတို့သည်ကြား၍ ဖိလိပ္ပုပြုသော နမိတ် လက္ခဏာ တို့ကို ဖြစ်သောအခါ သူ၏စကားကို တညီတညွတ်တည်း နားထောင်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား နတ်ဆိုးစွဲသောသူများတို့၏ အထဲမှ နတ်ဆိုးတို့သည် ပြင်းစွာသောအသံနှင့် အော်ဟစ်လျှက် ထွက်သွား ကြ၏။ ကိုယ်မလှုပ်နိုင်သောသူ၊ ခြေမစွမ်းသောသူအများတို့သည် လည်း ပကတိအဖြစ်သို့ရောက်ကြ၏။ ထိုမြို့သူမြို့သားတို့သည် အလွန် ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏” (တမန်တော် ၈း၅-၈)
ထိုကျမ်းပိုဒ်ကို သင်ဖတ်ကြားသောအခါ အလွန်ပင်သင်သည် လည်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်။ ၎င်းသည် လူအမြောက်အများတို့အား နိုးကြားမှုကိုဖြစ်စေသော ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ဍ ထိုကဲ့သို့ အကြိမ်များစွာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ဖူးပါသည်ဍ စစ်မှန်၍ ရိုးရှင်းသောဧဝံဂေလိဟူသည် အလွန်တုန်လှုပ်သောစေသောစကား တပါးသူတို့ နားချိုစေသော စကားတို့ထက် သာလွန်ပြီးရိုးရှင်းပါသည်။ ထိုသို့ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်း ဟောကြားစဉ် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ထိုင်ရသည်မှာ ညောင်း၍ အိမ်ပြန်ဖို့နာရီကို မကြာမကြာကြည့်သူပင် မရှိခဲ့ပေဍ ထိုကဲ့သို့သော ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို တောင်ဘက်ခြမ်း ဖန်ဒယ်မန်တဲလ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်ဟောပြောပွဲ၌ နှစ်ရှည်ကျွန်ုပ်တက် ရောက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ဝေငှချိန်သည် ညဉ့်သန်း ခေါင်အချိန်အထိ ကြာရှည်ပါသည်။ အချိန်နာရီအားဖြင့် ၇း၃၀ မိနစ်ထိသာ စီစဉ်ထားကြသော်လည်း အချိန်ကျော်လွန်သည့်တိုင်အောင် ဟောပြောဝေငှခဲ့ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း၊ တစ်ဦးတစ်ယောက် တောင်မှ တရားဟောရာခန်းမထဲက မထွက်သွားလိုကြပေဍ တစ်ဦး တစ်ယောက်မှ မထွက်လိုကြပေဍ ကလေးမိခင်တို့လည်း အိမ်၌ကလေး ထိန်းဖြင့် မိမိတို့ကလေးကို ထားခဲ့ကြသည်ကိုပင် မေ့လျော့သည့်တိုင် တရားနာကြ၏ဍ ရိုးရှင်းသောဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို နားထောင်ကြ ပြီးနောက် လူအများတို့သည် မိမိတို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ယေရှုခရစ် အား ကြောက်ရွံ့အံ့ဩတုန်လှုပ်လျှက်ရှိနေကြသည်။ ခုနှစ်ဆယ့် ငါးယောက်သော သူတို့သည် ထိုညနေခင်းဧဝံဂေလိတရားကို ကြားနာ သောကြောင့် မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသောအသက်တာသို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြပါသည်။ လူအများတို့သည် ငိုကြွေးကြ၏။ လူအများ တို့သည် အော်ဟစ်ငိုယိုခဲ့ကြ၏။ လူအများတို့သည် ချီးမွမ်း သီဆိုခဲ့ကြ၏။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တက်ရောက်ခဲ့ဖူးသော ဧဝံဂေလိ တရားဟောပွဲထဲက တုန်လှုပ်ကြောက်ရွံ့ဖွယ် စိတ်ဝင်စားဖွယ် တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
သို့ပါသော်လည်း မကြာခဏ အနည်းအကျဉ်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဧဝံဂေလိတရားပွဲများစွာကို ကျွန်ုပ်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဟောပြော ပွဲများနှင့် ဓမ္မသီချင်းသီဆိုခြင်းက ပို၍ခွန်အားဖြစ်စေပါသည်။ တရား ဟောကြားခြင်းက လူတို့၏စိတ်နှလုံးကို ညို့ယူဖမ်းစားစေပါသည်။ ဆုတောင်းခြင်းက လူတို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုကို လွှမ်းခြုံစေပါသည်။ ထိုသို့ အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် လူ့ဘ၀အသက်တာအသစ် ပြောင်းလဲဖို့ ဧဝံဂေလိတရားပွဲကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်ဍ ၎င်းနည်းတူစွာ ရှမာရိမြို့၌ လည်း စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိတရားပွဲတော်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ဍ
၂။	ဒုတိယ၊ ဖိလိပ္ပုသည် ခရစ်တော်အကြောင်းကိုသာ ဟောပြောခဲ့ပါသည်။
“ဖိလိပ္ပုသည်လည်း ရှမာရိမြို့သို့သွား၍ ခရစ်တော်၏ အကြောင်းကို ဟောလေ၏။ လူအစုအဝေးတို့သည်ကြား၍ ဖိလိပ္ပုပြုသော နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို မြင်သောအခါ သူ၏ စကားကို တညီတညွတ်တည်း နားထောင်ကြ၏။ တမန်တော် ၈း၅
ထိုနည်းလမ်းအားဖြင့် “သာသနာပြုဆရာ၏ ဆောင်ရွက်ရသောအမှု” ကို တမန်တော်ဝတ္ထု၌ ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။ သူတို့သည် ခရစ်တော်အကြောင်းကိုသာ ဟောပြောခဲပါသည်ဍ သူတို့သည် ခရစ်တော်အကြောင်းကိုသာ ဟောပြောခဲပါသည်ဍ သူတို့သည် ခရစ်တော်အကြောင်းကိုသာ ဟောပြောခဲပါသည်ဍ သူတို့သည် ခရစ်တော် အကြောင်းကိုသာ ဟောပြောခဲပါသည်ဍ ၎င်းနည်းအားဖြင့် ရှမာရိမြို့၌လည်း ဟောပြောခဲ့ပါသည်။ သာသနာပြုဆရာဖိလိပ္ပုသည် “ခရစ်တော်၏အကြောင်းကို ဟောလေ၏” ၎င်းနည်းအတိုင်း ရှမာရိမြို့၌လည်း ဟောပြောခဲ့ပါသည်။ သာသနာပြု ဆရာဖိလိပ္ပုသည် “ခရစ်တော်၏အကြောင်းကို ဟောလေ၏” ၎င်းနည်းအတိုင်း ရှင်ပေတရုသည် တပါးအမျိုးဖြစ်သော ကောနေလိနှင့် မိသားစုအား ဟောပြောခဲ့ပါသည်ဍ ရှင်ပေတရုဟောကြားခဲ့သည်မှာ ၊
“လူအပေါင်းတို့အား ထင်ရှားစွာပြတော်မမူ။ ဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူနှင့်သော သက်သေခံဖြစ်သောငါတို့အား ထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏။ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူသည်နောက် ထိုသခင်နှင့်အတူ ငါတို့သည် စားသောက် ရကြ၏။ ထိုသခင်သည်လည်း အသက်ရှင်သောသူတို့နှင့် သေသူတို့ကို တရားစီရင်သောသခင်ဖြစ်စေခြင်းငှါ ဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူကြောင်းကို လူအပေါင်းတို့အား ဟောပြောကြလော့။ သက်သေခံကြလော့ဟု ငါတို့အား ပညတ်ထားတော်မူ၏။ ထိုသခင်ကို ယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည် နာမတော် အားဖြင့် အပြစ်လွှတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို ခံရကြလတံ့ဟူ၍ ပရောဖက် အပေါင်းတို့သည် ထိုသခင်၏ သက်သေခံဖြစ်ကြသည်ဟု ပေတရုမြွက်ဆို၏” (တမန်တော် ၁ဝး၄၁-၄၃)။
ရှင်ပေတရုခရစ်တော်အကြောင်းကို လူအပေါင်းတို့အား ဟောပြော ခဲ့ပါသည်ဍ နောက်မှ ထိုသူအချို့တို့သည် ကုပရုပြည်သား၊ ကုရေနေပြည်သား ဖြစ်၍ အန္တိအုတ်မြို့သို့သွားပြီးလျှင် သခင်ယေရှု၏အကြောင်းတည်း ဟူသော ဧဝံဂေလိတရားကို ဟေလေနစ်လူတို့အား ပြောကြ၏။ ဘုရားသခင်၏လက်တော် သည် ထိုသူတို့နှင့်တကွ ရှိတော်မူသဖြင့် လူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်၍ သခင်ဘုရားထံသို့ ပြောင်းလဲကြ၏” (တမန်တော် ၁၁း၂၀-၂၁)။ တမန်တော်ဝတ္ထု ကျမ်း၌ ၎င်းနည်းလမ်းအတိုင်း ဟောပြောခဲ့ကြပါသည်ဍ ခရစ်တော်အကြောင်း ကိုသာ ဟောကြ၏ဍ ခရစ်တော်အကြောင်းကိုသာ ဟောကြ၏ဍ ထိုနည်းလမ်းအား ဖြင့် တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည် ကောရိန္တုမြို့၌လည်း ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို စတင်ဝေငှခဲ့သည်မှာ၊
“အကြောင်းမူကား ယေရှုခရစ်တော်တည်းဟူသော လက်ဝါးကားတိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော သခင်မှတပါး အဘယ်အရာကိုမျှ သင်တို့တွင် ငါမလိုဟု ငါ့စိတ်ပြဌာန်းခြင်းရှိ၏” (၁ကော ၂း၂)
ထိုသူတို့၏ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသည် ခရစ်တော်ကို ဗဟိုပြုနေပါသဖြင့် ဧကရာဇ်မင်းနီရိုးပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ဤခရစ်ယာန်တို့သည် သေသွားခဲ့ပြီးသော ဂျူးလူမျိုးတစ်ဦး” ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြသည်ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အိုဍ သူပြောကြားသည်မှာ တစ်ဝက်မှန်ပါသည်။ ဟုတ်ပါပေသည်။ ခရစ်တော်သည် အသေခံ၏။ သို့သော် ရှင်ပေတရုက လွှတ်တော်အရာရှိရုံး၌ ပြောကြားရာတွင်၊
“ဣသရေလလူတို့အား နောင်တရားနှင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ကို သေစေခြင်းငှာ ထိုသူကို အစိုးရသောအရှင်အရာ၌၎င်း၊ ကယ်တင်သောသခင်အရာ၌၎င်း၊ ဘုရားသခင်ခန့်ထား၍ မိမိလင်္ကျာလက်တော်နှင့် ချီးမြှင့်တော်မူပြီ။ ထိုအကြောင်း အရာတို့သည် အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကို ငါတို့သည် သက်သေခံဖြစ်ကြ၏။ ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို နားထောင်သောသူတို့အား ပေးသနားတော်မူသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်လည်း သက်သေခံဖြစ်တော်မူသည်ဟု ပြောဆို ကြ၏” (တမန် ၅း၃၁-၃၂)။
ထိုအကြောင်းအရာ ဟောကြားခြင်းသည်သာလျှင် ဧဝံဂေလိမည်၏ဍ ၎င်းသည် ဧဝံဂေလိအစစ်အမှန် ဖြစ်တော်မူ၏ဍ ၎င်းသည် သာသနာပြုဆရာတို့၏ လုပ်ဆောင် ရသော အမှုဖြစ်၏ဍ အမေရိကားရှိတရားဟောဆရာများ၊ ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း တရားဟော ဆရာများ၊ ယနေ့ခရစ်တော်၏အကြောင်းကိုသာ ဟောပြောကြရအောင်ဍ သင်တို့၏ သီချင်းစာအုပ်နံပါတ် (၆)ကို သီဆိုကြပါစို့ဍ
(၁၈၃၄-၁၉၁၁ ခုနှစ် အေကက်သရင်းဟန်ကီ ရေးသားသော
“ပြောစရာ ဝတ္ထုရှိသည်ကျူး” )
ယေရှုသည် အသေခံတော်မမူမှီညတွင် သူ၏တပည့်တော်တို့အား မှောင်မိုက် နေသော ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်။ ယေရှုဘုရားဆုတောင်း နေစဉ် တပည့်တော်တို့သည် အိပ်မောကျလျှက်ရှိကြပါသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ အပြစ်ရှိသမျှသည် ထိုဥယျာဉ်တော်ည၌ ယေရှုအပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အပြစ်၏အခသည် ယေရှုအားနှိပ်စက်သဖြင့် သူ၏ “ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား မြေပေါ်ကျသောသွေးစက်ကဲ့သို့ ဖြစ်သတည်း” (လုကာ ၂၂း၄၄)။ ယေရှုသည် ဆုတောင်း နေစဉ်တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ဗိမ္မာန်တော်မှူး လူအကြီးအကဲတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ဖမ်းဆီးကြ၏။ ထိုသူတို့က ကိုယ်တော်အား ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏အိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့အား “အရှက်ကွဲခြင်း တံတွေးထွေးခြင်းမှ ငါသည် ကိုယ်မျက်နှာမလွှဲ” (ဟေရှာယ ၅ဝး၆)။ ထို့နောက် သူတို့သည် ရောမဧကရာဇ်မင်း ပုန္တိပိလက်မင်းဆီသို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအခါ ပိလက်မင်းက ကိုယ်တော်အား ရိုက်နှိက်စေကာ အသွေးတော်သည် ခြေထိတိုင် စီးဆင်းလေသည်။ ထိုသူတို့သည် ဆူးဦးရစ်သရဖူကို အတင်းအဓမ္မဆောင်းစေကြ၏။ အသွေးတော်သည် ဦးခေါင်းမှ မျက်နှာပေါ်သို့ စီးဆင်းလေ၏။ အသွေးတော်စီးဆင်းတော်မူသော်လည်း အသေခံတော် မူမည့် မိမိလက်ဝါးကားတိုင်ကို အသေခံမည့် ကရာနီကုန်းပေါ်ထိ ထမ်းရွက်စေတော် မူခဲ့သည်။ ထိုသူတို့က ကိုယ်တော်၏လက်ခြေအား သံမှိုဖြင့် ရိုက်ထားခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါ ထိုသူတို့က လက်ဝါးကားတိုင်တော်ကို မထူကြ၏။ ကိုယ်တော်သည် လက်ဝါးကားတိုင်တွင် အသေခံတော်မူသောအခါ လူအများတို့သည် ပြက်ရယ်ပြုကြ၏။ ထိုအခါ ကိုယ်တော်က “အို အဘ သူတို့၏အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူပါ။ သူတို့သည် ကိုယ်ပြုသောအမှုကို မသိကြဟု မြွက်ဆိုတော်မူ၏” (လုကာ ၂၃း၃၄)၌ဖေါ်ပြထားသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကိုယ်တော်သည် ကြီးသောအသံဖြင့် “အိုအဖ ကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကို ကိုယ်တော်လက်၌ ကျွန်ုပ်အပ်ပါ၏”ဟူ၍ (ရှင်လုကာ ၂၃း၄၆)၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည် ပုန်းရည်ကိုခံပြီးမှ အမှုပြီးပြီဟုမိန့်တော်မူလျှက် ခေါင်းတော်ကို ငိုက်ဆိုက်ညွတ်၍ အသက်တော်ကို စွန့်တော်မူ၏” (ယောဟန် ၁၉း၃၀)
ထိုသူတို့သည် ကိုယ်တော်၏အလောင်းတော်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ ယူဆောင်လာကြပြီး မည်သူမျှ မသင်္ဂြိုလ်ဖူးသော ကျောက်ဂူထဲသို့ သင်္ဂြိုလ်ကြပါသည်။ သချုØင်းတော်ကို အစောင့်တပ်ချထားပြီး ပိတ်ထားသောတွင်း၀ပိတ်ကျောက်ကို တံဆိပ် ခတ်လျှက် သူခိုးဘေးရန်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်စေခဲ့ပါသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့မနက် မိုးလင်းဆဲဆဲအချိန်၌ မဂဒလမာရိနှင့် အခြားသောမာရိ တို့သည် သချုØင်းတော်ကို အကြည့်အရှုသွားကြစဉ် ထာ၀ရဘုရား၏ကောင်းကင် တမန်သည် ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းလာ၍ တွင်း၀၌ပိတ်ထားသောကျောက်ကို လှိမ့်လှန်ပြီးလျှင် ထိုကျောက်ပေါ်မှာ ထိုင်နေ၏။ ကောင်းကင်တမန်က “ကြောက်ရွံ့ခြင်း မရှိကြနှင့် လက်ဝါးကားတိုင်မှာသတ်သောယေရှုကို သင်တို့ ရှာကြသည်ကို ငါသိ၏။ ဤအရပ်၌မရှိ မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီ”ဟူ၍ (ရှင်မဿဲ ၂၈း၅-၆)၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ထိုနေ့ညဉ့်၌ ခရစ်တော်သည် သူ၏တပည့်တော်တို့ အလယ်၌ ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါသည်။ တပည့်တော်တို့နှင့်အတူ စားသောက်ခဲ့ကြ၏။ ထို့နောက် ရက်ပေါင်းလေးဆယ်လုံးလုံး တွေ့မြင်ခဲ့ကြသေး၏။ ယေရှုသည် ဝိညာဉ် ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် မဟုတ်ဘဲ၊ “အရိုးအသားနှင့်ပြည့်စုံ၏” (လုကာ ၂၄း၃၉)ဟူ၍ ဖေါ်ပြသည့်အတိုင်း တပည့်တော်တို့သည် လက်နှင့်ပွတ်သက်ကြသေး၏။ ရက်လေးဆယ် လုံးလုံးယေရှုသည် တပည့်တော်တို့အား သွန်သင်ဆုံးမတော်မူခဲ့သေးသည်။ ကိုယ်တော်က တပည့်တော်တို့အား၊
“ယေရှုသည်အနီးအပါးသို့ ချည်းတော်မူပြီးလျှင် ကောင်းကင်ဘုံ၌လည်းကောင်း မြေကြီးပေါ်၌လည်းကောင်း စီရင်ပိုင်သောအခွင့်တန်ခိုးရှိသမျှတို့ကို ငါခံရပြီ သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျှက် ခမည်းတော်၊ သားတော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့ ငါသည် သင်တို့အားပေးသမျှသော ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ ဆုံးမဩဝါဒ ပေးကြလော့ ငါသည်လည်း ကပ်ကမ္ဘာကုန်သည့်တိုင်အောင် သင်တို့နှင့်အတူ အစဉ်မပြတ်ရှိသည်ဟု တပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏” (မဿဲ ၂၈း၁၈-၂၀)
“တပည့်တော်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ပြီးမှ အလွန်ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာခြင်းနှင့် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြန်သွားကြ၏။” (လုကာ ၂၄း၅၁)
ထိုပုံပြင်ကို သင်တို့အားပြောပြဖို့ ကျွန်ုပ်၏တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်ဍ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါသည်ဍ ၎င်းသည် ဧဝံဂေလိတရား ဟောဆရာတိုင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်ဍ သာသနာပြုဆရာ ဆောင်ရွက်သောအမှုကို ဆောင်ရွက်လော့”ဍဍဍ အိုဍ ထိုထက်ပိုသော အကြောင်းအရာ ရှိပါသေးသည်ဍ
၃။	တတိယ၊ ဖိလိပ္ပုသည် လူများတို့၏ ထိုက်ထိုက်တန်တန် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
“လလူအစုအဝေးတို့သည်ကြား၍ ဖိလိပ္ပုပြုသော နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို မြင်သောအခါ သူ၏စကားကို တညီတညွတ်တည်း နားထောင်ကြ၏” (တမန်တော် ၈း၆)
ဖိလိပ္ပုသည် ဘုရားမသိသောသူတို့အပေါ် ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ သင်သည် “ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုချင်း လေ့လာနည်းပညာဖြင့်” မျက်ရည်ကျန၍ ဩဇာလွှမ်းနိုင် မည်မဟုတ်။ စိတ်ကူးယဉ်နေ၍လည်း ထိုသို့ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ မရှင်းမလင်း သောစကားကို ဇာချဲ့ပြီးဟောကြားခြင်း၊ ညံ့ဖျင်းသောစကားဖြင့် တနင်္ဂနွေနံနက်ခင်း မိနစ် သုံးဆယ် တရားဟောကြားခြင်းသည် ကန္တာရ၌ ရှမာရိလူမျိုးတို့က အထင်သေးသရော် ပြောင်လှောင်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေမည်ဍ သို့သော် ဖိလိပ္ပု၏တရားဟောခြင်းက ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ “တညီတညွတ်တည်း နားထောင်ကြ၏” အကြောင်းမှာ “လူပညာ အားဖြင့်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် တည်စေခြင်းငှါ ငါ့စကား ငါ့ဒေသနာတော်သည် လူပညာနှင့်ယှဉ်သော ဖျားယောင်သောစကားနှင့်တကွ ရှိသည် မဟုတ်၊ ဝိညာဉ်တော်၏ နိမိတ်လက္ခဏာတန်ခိုးတော်နှင့် တကွရှိ၏” (၁ကော ၂း၄)
ထို့နည်းအတိုင်းသာ ဖိလိပ္ပုဟောကြားခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုလည်း ထိုကဲ့သို့ ဟောကြားခဲ့၏။ ရှင်ပေတရုသည် ပင်တ္တေဂုတ္တေပွဲနေ့၌ ထိုသို့ ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ နှုတ်ကပတ်တော် မိန့်တော်မူသည်ကား “ကျယ်သောအသံနှင့်ဟောပြောသည်ကား”ဟူ၍ (တမန် ၅း၁၄) ၌ မိန့်တော်မူပါသည်ဍ ထိုကဲ့သို့ ဆရာတော်ဝိုက်ဖီးလ်လည်း ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဒံယေလရိုးလန်း ဟောကြားခဲ့သည်ဍ ထိုကဲ့သို့ ဝီစလီလည်း ဟောကြားခဲ့သည်ဍ ထိုသို့ ဟိုဝလ်စာရီစ်လည်း ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ခရစ္စမတ်အီဗန်ဟောကြားခဲ့ပါသည်ဍ ထိုကဲ့သို့ ရစ်ချက်ဘစ်တာလည်း ဟောကြားခဲ့ပါ သည်ဍ ထိုကဲ့သို့ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဟောပြောဖို့လိုပါသည်။ အမှန်ပါပဲဍ ဘုရားသခင် မစတော်မူပါဍ “သာသနာပြုဆရာ ဆောင်ရွက်ရသော အမှုကို ဆောင်ရွက်ကြလော့”
၄။	စတုတ္ထ၊ ဖိလိပ္ပုသည် လူတို့၏ ခံစားမှုကို မွှေနှောက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသည်။
စစ်မှန်သောသာသနာပြုဆရာတို့သည် ထိုနည်းလမ်းအတိုင်းသာ ဟောပြော သက်သေခံကြပါသည်ဍ နတ်ဆိုးစွဲသောသူများတို့၏ အထဲမှ နတ်ဆိုးတို့သည် ပြင်းစွာသောအသံနှင့် အော်ဟစ်လျှက် ထွက်သွားကြ၏” (တမန်တော် ၈း၇)၌ မိန့်တော် မူပါသည်။ စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိသတင်းစကားကြောင့် စိတ်နှလုံးခံစားချက် တုန့်ပြန် ခြင်းနှင့် နတ်ဆိုးများထွက်သွားလေ့ရှိသည်ဍ သင်သည် တပါးသောသူတို့၏ စိတ်ခံစားချက်ကို မဖြိုခွဲနိုင်ဘဲ ဧဝံဂေလိအမှု ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ နိုးထမှုလည်း ရှိလာမည်မဟုတ်ပါဍ ဒေါက်တာအယ်လ်လွှိင်း-ဂျုံးပြောကြားခဲ့သည်မှာ “အတိတ်ကာလ တစ်လျှောက်လုံး တရားဒေသနာဟောကြားရာတွင် စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ဆရာ သနားကြင်နာ မှုပြင်းထန်စွာဟောကြားခြင်းက ပို၍ထိရောက်ခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား၊ ယနေ့ခေတ် တရားဟောဆရာတို့သည် အတိတ်ကာလတရားဟောဆရာတို့၏ နည်းလမ်းအတိုင်း မလိုက်လျှောက်ကြတော့ဘူးမဟုတ်ပါလား၊ထပ်ခါတလဲလဲပြောလိုပါသည်။ ဟပြင်းထန် သောစိတ်ခံစားချက်မရှိဘဲ] မည်သည့်တရားဟောဆရာမဆို ပလ္လင်ပေါ်က မရှိနေ သင့်ပေ။ သူ့အား ထိုနေရာသို့ ခွင့်မပြုသင့်ပေ။” (D. Martyn LIoyd-Jones, M.D., Preaching and Preachers, Zondervan Publishing House, 1971; pp. 90-97)
လွန်ခဲ့သော အပတ်အနည်းငယ်က ဒေါက်တာမန်ဖီလုန်၏ လက်ရှိအမှုတော်မှ အနားယူသည့် နှုတ်ဆက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက်လာကြသော သူတို့သည် တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှဖြစ်သဖြင့် ကျွန်ုပ်နှင့် အားလုံးလိုလို သိနေကြပါသည်။ ထိုအခါ ဒေါက်တာလုန်၏သား ပြောကြားခဲ့သည်မှာ ခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာမည့်အကြောင်း ဒေသနာကိုကြား၍ ထိတ်လန့်သဖြင့် ကျွန်တော်အသက်တာ ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်နှင့် စားပွဲအတူထိုင်သော လူတစ်ဦးကလည်း ငရဲအကြောင်း တရားဒေသနာကို ကြားဖူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်အား ထိန့်လန့် ဒေါသထွက်စေခဲ့သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ “သို့သော်” ရုတ်တ ရက်ကြားလိုက်ရ၍ ကျွန်ုပ်ကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့လိုသည်ဟု သိလိုက်ရသဖြင့် ထိုစဉ် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံခဲ့ပါသည်။” ထိုနည်းလမ်းအတိုင်း တရားဟောကြားခြင်းက တပါးသူ၏အသက်တာကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါသည်။ “သာသနာပြုဆရာ ဆောင်ရွက်ရ သောအမှုကို ဆောင်ရွက်လော့”
ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ဟောကြားဖို့ အစဉ်သဖြင့် အရေးကြီးပါသည်။ သင်သည် တိကျသောဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို လက်ခံခြင်းမရှိလျှင် သင်သည် ဒေါသထွက်ပြီး ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုခံစားရမည်ဍ “သင်သည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက် ခြင်းငှါ စိတ်နှလုံးသားဖြင့် ယုံကြည်ရ၏။” (ရောမ ၁ဝး၁၀)၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။
သင့်အား သတိပေးလိုသည်မှာ ခရစ်တော်သည်သင့်အား တရားစီရင်ဖို့ရန် ကြွရောက်လာပါတော့မည်။ တရားစီရင်ခြင်းသည် ယ္ခုပင် ရောက်ရှိလို့လာလေပြီ။ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်နေသည်ကို သတိရလိုက်ပါ။ ကြောက်လန့်ဖွယ်ရေလွှမ်းမိုး နေသည်ကို သတိရလိုက်ပါ။ ကျောက်ခမန်းနှင့်မုန်တိုင်းများ ကျရောက်နေသည်ကို သတိရလိုက်ပါ။ ရေရှားပါးမှုပြဿနာ၊ ဗုံးကြဲအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ကမ္ဘာကိုခြိမ်း ခြောက်နေသည်ကို သတိရလိုက်ပါ။ သင်မတွေ့ခဲ့ဖူးဘူးလား၊ လော့ဒ်အိန်ဂျယ်မြို့၌ “ကြီးမားသောပေါက်ကွဲမှု”တစ်ခုကြောင့် မြေကြီးသည်လည်း ပွင့်ဟလာပြီး အောက်ငရဲသို့ ကျရောက်မည်ဆိုလျှင် သင်၌ မည်ကဲ့သို့ဖြစ်လာမည်နည်း၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် အေးစက်မာတောက်ပြီး ရေခဲတိုက်သို့ ရောက်ရှိမည်ဆိုလျှင် သင့်ဝိညာဉ်သည် မည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း။ အကယ်၍ သင်သည် အပျော်အပါးတစ်ခုတည်းအတွက်နှင့် ဘုရားကျောင်းကို တက်ရောက်မည်ဆိုလျှင်ဍ သင့်ဝိညာဉ်အဖို့ အပျော်သဘော အသက်ရှင်မည်ဆိုလျှင်ဍ ဘုရားသခင်အား အပျော်သဘောလောက်နှင့် ကိုးကွယ်မည် ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်သည် သင့်အားပြစ်ဒါဏ်မပေးပဲ လွှတ်ထားမည်မဟုတ်ပေ။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်သည် လောင်သောမီးဖြစ်တော်မူ၏။
သင့်ဘ၀ အသက်တာသည် အပျော်အတွက်ပဲ အသက်ရှင်ပါသလား၊ ဝိညာဉ်တော်အား ငြင်းပယ် နေပါသလား၊ သင်သည် တိတ်ဆိတ်စွာအပြစ်လွန်ကျူးနေ၍ ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းကို ဘယ်တော့မှမရှာဖွေတော့ဘူးလား၊ သင်၏စိတ်နှလုံးသည် မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်များနှင့် အပြစ်တင်ဝေဖန်မှု ပြည့်နှက်နေပါသလား၊ အို၊ ယနေ့ည သင့်အားကျွန်ုပ်တိုက် တွန်းလိုသည်မှာ သင့်အဖို့ အချိန်ကုန်လု နီးပါးဖြစ်နေပါသည်ဍ ခရစ်တော်ယေရှု၏အသွေးတော်နှင့် သင့်အပြစ်ကို ဆေးကြော ခွင့်လွှတ်ခြင်း မရရှိသေးပါလျှင်၊ သင့်အဖို့အချိန်သည် ကုန်လုနီးဖြစ်ပါသည်ဍ သင့်အထံတော်ပါးက နောက်မလှည့်ပါနှင့်ဍ အပြစ်ဆက်၍ မကျူးလွန်ပါနှင့်ဍ အပြစ်ဆက်၍ မကျူးလွန်ပါနှင့်ဍ ကျွန်ုပ်၊ မိတ်ဆွေအား သတိပေးလိုပါသည်။ သင်ဘယ်တော့မှ သခင့်ထံတော်ပါးက လှည့်မထွက်သွားပါနဲ့။ အပြစ်၏အဖိုးအခ ငရဲဒါဏ်မှ သင်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ နောက်ဆုံးသောအချိန်နာရီ သင့်လက်၌ ရှိသေးသည်။ ဤသတိပေးခြင်းက ကျွန်ုပ်၏ တာဝန်ဝတ္တရားပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ရသော ဧဝံဂေလိတရားပင်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက် သင်တို့၏ သီချင်းနံပါတ်ကို (၈)ကို သီဆိုကြပါစို့။
- ကျွန်ုပ်အပြစ်ထမ်းရွက် ကယ်တင်ရှင်အား မေးလျော့အစဉ်
မေတ္တာအရှင်သည် သင့်အား ဖိတ်ခေါ်လျှင်
- ကျွန်ုပ်၏နှလုံးအတွေးအခေါ် ကျောက်ပမာ မာကျောလျှက်ရှိ
ဝိညာဉ်ဘုရားရှိအစဉ်အခါဍ ပင့်သက်ရှူသက် ရှိစဉ်သတိမူဖို့
- ခရစ်တော်သခင်အား ငြင်းပယ်အချိန်သည် ကုန်လွန်မည်
ယနေ့သည် ကယ်တင်ရာနေ့ အိုယေရှုမစတော်မူပါ
(၁၈၉၅-၁၉၈၀ခုနှစ်၊ ဒေါက်တာဂျွန်အရ်ရိုက်(စ်)သီကုံးရေးသားသော “မေ့လျော့အစဉ်”)။
အကယ်၍သင်သည် အနာဂါတ်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း ဆွေးနွေးလိုပါလျှင်၊ နောက်ဘက်ခန်းမစီသို့ သွားပါ။ ယေရှုဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ကိုး စားလာဖို့ သင့်အားဒေါက်တာကေကန်မှ လက်တွဲခေါ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ မစ္စတာလီ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်တို့အဖို့ဆုတောင်းပေးပါ။
-	တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂရိတ်တန်အယ်လ်ချန်မှ တမန်တော်ဝတ္ထု (၈း၅-၈)အထိကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-	တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်(စ်)မှ (၁၈၉၅-၁၉၈၇ခုနှစ်၊ ဒေါက်တာဂျွန်အာရိုက် သီကုံးရေးသားသော သီကုံးရေးသားသော “မေ့လျှော့အစဉ်” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။
“သာသနာပြုဆရာ ဆောင်ရွက်ရသော အမှုကို ဆောင်ရွက်လော့” (၂တိ ၄း၅)
၁။	ပထမ၊ ဖိလိပ္ပုက ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ဟောကြားသောအခါ လူအများတို့သည် အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြသည်။ တမန်တော် ၈း၅-၈
၂။	ဒုတိယ၊ဖိလိပ္ပုသည် ခရစ်တော်အကြောင်းကိုသာ ဟောပြောခဲ့ပါသည်။
တမန်တော် ၈း၅၊ ၁ဝး၄၁-၄၃၊ ၁၁း၂၀-၂၁၊ ၁ကော ၂း၂၊ တမန်တော် ၅း၃၁-၃၂၊ လုကာ ၂၂း၄၄၊ ၆၄၊ ဟေရှာယ ၅ဝး၆၊ လုကာ ၂၃း၂၄၊ ၄၆
ယောဟန် ၁၉း၃၀၊ မဿဲ ၂၈း၅-၆၊ လုကာ ၂၄း၃၉၊ မဿဲ ၂၈း၁၈-၂၀
၃။	တတိယ၊ ဖိလိပ္ပုသည် လူများတို့၏ ထိုက်ထိုက်တန်တန် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ တမန်တော် ၈း၆၊ ၁ကော ၂း၄၊ တိမန်တော် ၂း၁၄၊
တမန်တော် ၈း၇၊ ရောမ ၁ဝး၁၀